Saaxiibayaal | August 2019
Shabakadda iyo Internetka
Waxaan ku dhex jirnaa "Sawir la'aan" Odnoklassniki
Editor Ee Doorashada August 22,2019
Ugu Weyn Ee Saaxiibayaal
Tirtiridda kaarka Odnoklassniki
Ka qaybqaatayaasha shabakadda bulshada Odnoklassniki waxay inta badan helayaan lacagta gudaha ee khayraadka - oo loo yaqaan 'OKi', oo ay ku caawiyaan kuwaas oo ay ku xiraan adeegyo kala duwan, xaaladaha iyo hawlaha profile, waxay siiyaan hadiyado dadka kale. Mid ka mid ah hababka suurtagalka ah ee lacag bixinta waa kaararka bangiga.
Tirtiridda asxaabta Odnoklassniki
Saaxiibada - tani waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee dabeecadda qof kasta oo ku saabsan qoyska iyo qoyska. Laakiin xidhiidhada bini-aadmigu waa kuwo adag oo wareersan, waxaannu leenahay niyad-jab iyo nacayb kale. Dabcan, shuruucda dadwaynaha ayaa loo qoondeeyey saadkan sida shabakadaha bulshada ee internetka. Waxaan saaxiibo ku sameysanaa Odnoklassniki, isdhaafsiga fariimaha, faallo ku saabsan sawirada iyo wararka, la xiriir kooxaha xiisaha leh.
Gali bogga Odnoklassniki
Dad badan oo malaayiin ah ayaa leh bogooda u gaarka ah Odnoklassniki, waxay la xiriiraan asxaabta, qaraabada iyo aqoonyahannada, isweydaarsiga wararka, u hambalyeeyaan midba midka kale fasaxyada iyo xafladaha, sawiro iyo fiidiyoow. Joogista xisaabtu waxay bixisaa fursad ballaaran oo isgaarsiineed oo loogu talagalay qof kasta oo ka mid ah khayraadka.
Qaybinta qoraalada Odnoklassniki
Qoraallada wax loogu yeero waxaa laga helaa shabakada bulshada ee Odnoklassniki si markaa isticmaal kasta oo khayraadkani si deg-deg ah oo sahlan u soo dirto sawir, video, cajalado fiidiyoow ah, qoraal kasta, cinwaanka, iyo wixii la mid ah waraaqda cuntada. Macluumaadkani waxay isla markiiba arki doonaan dhamaan saaxiibbadaada waxayna awoodaan inay ka wada hadlaan oo ay ka hadlaan.
Waxaan joojineynaa arjiga "Friends" ee Odnoklassniki
Shabakad kasta oo bulsheed, waxaad ku dari kartaa saaxiibadihii hore iyo dadka xiisaha leh ee saaxiibada. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad u dirtay codsi qof si qalad ah, ama si fudud u beddesho maskaxdaada ku darida isticmaale, ka dibna waa suurtagal in la joojiyo iyada oo aan sugin in la aqbalo ama la diido dhinacaas.
Maxaad u furi weyday iskuulka?
Ardaydu waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ugu caansan ee qaybta Ruushka ee internetka. Laakiin, inkastoo ay caan ku tahay, goobta waxay mararka qaar ka shaqeysaa xasilooni la'aanteed ama aysan ku dhicin. Waxaa jiri kara sababo badan oo tan. Sababaha ugu muhiimsan ee ardayda isku fasalka ah aysan furin Maqnaanshaha, taas oo ay ugu wacan tahay goobta aan lagu dhajin karin qayb ahaan ama gebi ahaanba, waxay inta badan ku xiran tahay dhinaca isticmaalaha.
Ku dheji cajaladada ardayda fasalka
Qalabka wargeysku wuxuu ku jiraa bogga qof kasta iyo bulshad kasta oo ka tirsan shabakadda bulshada ee Odnoklassniki. Waxay muujinaysaa faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan dhacdooyinka ku dhaca dhacdooyinka ballaaran ee ilaha. Mararka qaarkood waxaa dhici karta in isticmaaluhu uusan jeclaaneynin in ay jiraan waxyaabo badan oo aan loo baahneyn oo aan faahfaahineynin cajalad ku duuban.
Furitaanka farriin ku xiran Odnoklassniki
Isticmaalayaal badan oo ka mid ah shabakadda bulshada ee Odnoklassniga ayaa adeegsanaya "Shaqsiga Gaarka ah" ee "Pay Profile". Marka faahfaahinta la xiray, dhammaan macluumaadka adiga kugu saabsan waxaad heli kartaa oo keliya saaxiibadaada khayraadka, taas oo kuu ogolaanaysa inaad si ammaan ah u ilaaliso naftaada ka-qaybgalayaasha mashruuca oo dhib badan iyo kuwa aan ku filnayn. Iyo sida loo furo Odnoklassniki, haddii ay tani tahay baahi degdeg ah?
Sida loo eego lambarka sirta Odnoklassniki
Xusuusinta aadanuhu waa mid ka fog midabtakoor, sidaas darteedna waa suurtogal in qofku uu iloobo lambarka sirta ah si uu u galo akoonkiisa xisaabta Odnoklassniki. Maxaa la samayn karaa si qalad ah oo qaldan? Waxa ugu muhiimsan ee ah inaad is dejiso oo ha argagixin. Raadinta lambarka sirta Odnoklassniki Haddii aad ugu yaraan hal mar kaydisay eraygaaga sirta ah markaad gasho xisaabta Odnoklassniki, waxaad isku dayi kartaa inaad aragto oo aad aragto ereyga koodhka ee browserka aad isticmaashid.
Hantida adeegga "Dhammaan wax walba" oo ku yaal Odnoklassniki
Dhammaan dadka caadiga ahi waxay jecel yihiin inay helaan hadiyado. Wanaag kuuma aha inaad dadka kale siiso. Marka la eego, shabakadda internetka ma aha mid aad uga duwan nolol maalmeedka. Horumarinta shabakada bulshada ee Odnoklassniki waxay dadka isticmaala siineysaa adeega bil kasta oo mushahar ah oo loogu talagalay "Adeegga Dhammaan", kaas oo bixiya fursad ay ku siiyaan hadiyado kala duwan saaxiibada iyo aqoonta khayraadka.
Raadinta bogga Odnoklassniki
Waxaad ka heli kartaa bogga ku dhow qofkasta oo isticmaala Odnoklassniki, adigoo isticmaalaya matoorada raadiyaha saddexaad (Yandex, Google, iwm.), Iyo shabakadda bulshada lafteeda adigoo isticmaalaya raadinta gudaha. Si kastaba ha ahaatee, waa in lagu dhajiyaa maskaxda in qaar ka mid ah xisaabaadka isticmaalaha (oo ay ku jiraan kuwaaga) laga yaabo in la qarin karo iyada oo lagu dhejinayo goobo gaar ah.
Soo qaado sawirrada Odnoklassniki illaa kumbuyuutarka
Isticmaal kasta oo ka mid ah shabakadda bulshada ee Odnoklassniki ma aha oo keliya sawirro sawirro, laakiin sidoo kale soo qaado. Inkastoo xaqiiqda ah in goobta aysan haysan wax dhisma ah oo lagu sawirayo sawirada kombiyuutarka ama kombiyuutarka, howlahaas waxaa mar hore lagu dhajiyay barta shabakada. Ku saabsan suurtogalnimada soo dejinta Odnoklassniki Bogga laftiisa ma bixiso adeegsigeeda shaqadeeda sida farsamooyinka, fiidiyowga, sawirada, sawirrada, sawirka, animatka) kombiyuutarkooda, laakiin nasiib wanaag, maanta waxaa jira siyaabo badan oo lagu xaddidayo xadadan.
Raadi qof aanad iska diiwaan galin Odnoklassniki
Midkeenaba midkeenu ma ahan xubin ka mid ah dhamaan shabakadaha bulshada, dhamaantood ma rabaan in ay iska diiwaan galiyaan midkood, qaar baa mamnuucay kuwa u xilsaaran. Miyuu suurtagal yahay isticmaale aan xisaab laheyn Odnoklassniki si uu u helo qof kale oo halkaas jooga? Haa, waa wax suurtogal ah.
U dirista fiidiyowga fariinta Odnoklassniki
Inta badan annaga ayaa ku raaxeysta la xiriirka asxaabta iyo ogeysiisyada shabakadaha bulshada. Laakiin mararka qaar fariin qoraal ah oo fudud ah ma awoodo inay si buuxda u muujiso dhammaan macnaha iyo nuxurka aad rabto in aad u gudbiso wareysiga. Xaaladaha noocaas ah, waxaad ku soo lifaaqi kartaa fariintaada feylka fiidiyowga, si aad u hadasho, si cad.
Kordhin qoraalka bogagga Odnoklassniki
Heerka font-ka ee Odnoklassniki ayaa noqon kara mid aad u yar, taas oo adkayn doonta isdhexgalka adeegga. Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu caawin karo kordhinta font ee bogga. Noocyada cabbirka cabbirka ee OK OK Odnoklassniki waa midka akhriska badan ee kormeerayaasha casriga ah iyo qaraarada.
Waxaan u diri karnaa Odnoklassniki
Kaararka Odnoklassniki waxay la mid yihiin hadiyado, marka laga reebo in qaar ka mid ah aan la soo bandhigi doonin isticmaalka bakhaarada leh hadiyado kale. Intaa waxaa dheer, kaararka boostarrada badan oo ay bixiyaan shabakada bulshada oo ay iska dhaafaan qiimo aad u qaali ah oo leh warbaahin (muusik iyo animation). Ku saabsan kaadhadhka Odnoklassniki In shabakadaan bulsheed waxaad u diri kartaa kaar qof qof fariin gaar ah leh (ma ahan mid ku habboon in laga qaado Odnoklassniki) ama "Gift" oo lagu meeleyn doono bogiisa.
Waxaan ku wareegnaa "liiska madaw" ee Odnoklassniki
Haddii qofku u arko inay lagama maarmaan tahay inuu kuu soo diro "Blacklist" (PC), markaa tani macnaheedu waa inaadan awoodin inaad booqato boggiisa, u qor farriimo, isaga oo eega casriyeynta "Ribbon". Nasiib wanaag, waxaa jira fursad yar oo loo maro qufulka noocan oo kale ah. Keenista xaaladaha degdegga ah ee Odnoklassniki siyaabaha caadiga ah Si rasmi ah, haddii laguu keenay xaalad deg-deg ah, ka dibna waad ka bixi kartaa ama si kasta ha u dhaafin xayiraadaha lagu soo rogay iyada oo aan la helin ogolaansho qofka kuu keenay.
Waxaad noqotay qofka leh mulkiilahaaga boggaaga ah ee shabakada bulshada Odnoklassniki mana garanaynin halka laga bilaabayo? First of all, waxaad u baahan tahay in aad u habeynta koontadaada iyadoo loo eegayo baahidaada iyo rabitaanka shakhsi ahaaneed. Samee fudud oo aad u awood u leh qof kasta oo aqbalay.
Waxaan kasbannahay OKi goobta Odnoklassniki
Hadda ku dhawaad ​​shabakad kasta oo bulsheed waxay leedahay lacag lacageed, oo aad adigu samayn karto ficillo aan la haynin dadka kale ee isticmaala goobta. Halkan iyo Odnoklassniki waxaa jira lacagtaas oo kuu ogolaanaysa inaad furto shaqooyinka dheeraadka ah ee goobta, tusaale ahaan, habka "aan muuqan" ama dhibcaha "5+" mudo ah.
Hadiyado bilaash ah oo loogu talagalay sawirkaaga OK
Malaha isticmaale kasta oo ka mid ah shabakadda bulshada Odnoklassniki waxay jecel yihiin marka saaxiibadu u soo diraan hadiyado iyo sawirada isticmaalaha waxaa lagu qurxiyey sawirro qurxoon, xiiso leh iyo muuqaal ah. Laakiin, shaki la'aan, waxay ka sii fiicantahay inaad ku farxiso asxaabtaada hadiyado fasax ah ama sidan oo kale. Mashruuca Odnoklassniki, waxaa jira qaabab gudaha ah oo ah lacag bixinta khayraadka - oo loo yaqaan 'OKI', adoo iibsanaya lacagta caadiga ah ee aan adeegsan karno adeegyo kala duwan, oo ay ka mid yihiin soo bandhigid hadiyado.
Abuurso sirta internetka
Sida loo sameeyo xiriirka kooxda VKontakte
Isku dey in lacag la isku duubo oo faa'iido laga helo YouTube-ka
Dhibaatooyinka maqaallada furitaanka VKontakte
Shaashado iyo sawirro
Dayactir iyo dib u dhis
Instagram waa adeeg bulsho oo aad loo jecelyahay, oo ah nuxurkeedu yahay in la daabaco kaadhadhka sawirada yar-yar, inta badanaaba wareeg ah. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa hababka kuu saamaxaya inaad sawirrada ka soo qaadato Instagram si kombiyuutar ama casriga ah. Haddii aad ugu yaraan hal mar u baahan tahay inaad sawir ka soo qaadato Instagram ilaa xasuusta casriga ama kombiyuutarka, ka dibna waxaa laga yaabaa inaad ogaatey in habka caadiga ah uusan sameyn karin nidaamka loo baahan yahay. Read More
Waa maxay sababta ay HTTPS u shaqeyn weydo Internet Explorer
Ka ilaali ilaalinta faylka Excel
WindowsJawaabta su'aalahaDhibaatooyinka ciyaarahaShabakadda iyo InternetkaWararkaMaqaalloVideo iyo codEreyExcelKombiyuutarka WindowsKuwa bilowga ahLaptopDayactir iyo dib u dhisAmniga (fayraska)Qalabka mobileXafiiskaBrowsersBarnaamijyadaKombiyuutarkaIOS iyo MacOSRaadinta birtaDiskTorrentsSkypeBluetoothAkhbaartaTilifoonnada gacantaKhaladaadCodkaDarawaliinta
https://termotools.com so.termotools.com © Saaxiibayaal 2019